Tuesday August 29, 2017 - 21:59:53 in Wararka by Super Admin
Malaayiin qof ayaa isaga barakacay magaalooyin katirsan gobolka Texas ee wadanka Mareykanka kadib duufaan wadata roobab iyo fatahaad.
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in warshad Kiimikada soo saarta ay dilaacday arrinkaas oo sababay in maamulka magaalada Houston uu dadka ku amro in ay isaga baxaan magaalada oo markii hore ay biyaha roobka maasheeyeen.
Waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Houston ayaa go’ay waxayna magaaladu isku bedeshay wabi oo kale sababa la xiriira biyaha Roobabka Mahiigaanka ah oo dhax ceegaaga dhammaan waddooyinka magaalada.
Duqa magaalada ugu weyn gobolka Texas ayaa warbaahinta u sheegay in dad kabadan 2 milyan oo qof laga saaray guryihii ay deganaayeen si looga feejignaado dhimasho dheeri ah oo gaarta dadka, dhammaan waddooyinka soo gala Houston ayaa go’an iyadoona ciidamada gurmadka degdegga ay isticmaalayaan doomo iyo diyaaradaha qumaatiga ukaca.
Sawirro lagasoo qaaday Houston ayaa muujinaya musiibada oo gallaafatay kaabayaashii muhiimka ahaa ee magaalada iyadoona waddooyinkii caanka ahaa ee magaalada 4-aad ee ugu weyn Mareykanka ay isku bedeshay biya fadhiisad.
Duufaanta Harvey loogu magac daray ayaa ku socota xawaara dhan 2012KM saacaddiiba waxayna jaraysaa geedaha halka biyaha roobku ay kor u dhaafayaan 120 setimitir.
Doomo ayay isticmaalayaan dadka isaga firxanaya magaalada Houston , dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaalad degdeg ah kusoo rogay gobolka Louisiana oo daris la ah Texas.
Dad badan oo Mareykan ah ayaa layaabay in magaalada 4-aad ee wadankooda ugu weyn ay noqoto lama degaan islamarkaana ay umuuqaal ekaato wabi.
Khasaaraha ka dhashay duufaanta Harvey ayaa qiyaasaa in ay gaarto 180 Bilyan oo dollar waana khasaarihii ugu xooganaa ee Mareykanka kasoo gaaro duufaan tan duufaantii Katariina ee Mareykanka ku dhufatay sanaddii 2005.